Deg Deg: Jeegaanba Jeegan Baa Ka Danbayn Cali Gurey Oo Kabaha La Dul-maray Beel-Weynta Habar Yoonis - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Jeegaanba Jeegan Baa Ka Danbayn Cali Gurey Oo Kabaha La...
Deg Deg: Jeegaanba Jeegan Baa Ka Danbayn Cali Gurey Oo Kabaha La Dul-maray Beel-Weynta Habar Yoonis
Jeegaanba Jeegan Baa Ka Danbayn Cali Gurey Oo Kabaha La Dul-maray Beel-Weynta Habar Yoonis
JEEGAANBA JEEGAAN BAA KA DAMBAYN
Bal day waxa loogu sheekeeyay. Shir JEEGAAN la yidhaa oo dalka ka dhacay miyuu jiray? mise reeraha codkooda ayaa loo tartamay ninba in uu ka helayba? Salaadiinta Habar Awal inay la shireen salaadiinta reeraha Somaliland ee kale ma waxay ka duwanayd salaadiintii garxajis ee la shiraysay salaadiinta reeraha Somaliland ee codka cirro uga doonayay? Kolkii uu Axmed Silanyo la tartanayay Daahir Rayaale hogaamiye dhaqaaneedka Habarjeclo miyaanay la shirin hogaamiye dhaqameedka reeraha kale? Kuwa Habar Yoonis iyo Kuwa Sacad Muuse ma hayaan ciyaalkan loo sheekeeyay midba wixii ay kala kulmeene aniga ayuu afka ila soo galaye saw in aan runta uga sheego hadii isagu uu yaraa oo aanu qaangaadh ahayn maaha? Beenina way iga reeban tahaye igu qabta hadii mid been ah aanu ku daro.
Sacad Muuse wuu ka aqbalay oo wuu taageeray Silanyo in kastoo 80 cod lagaga helay. Kuwii Habar Yoonis maxay kala kulmeen wuilkow? Waxa la ogyahay oo ninkii afkiisa ka yidhi la garanayaa;
“Habarjeclo hadaa tihiin fudayd waanu idinku ogayn laakiin nacasnimo idinkumaanu ogayn. Ma maanta ayaa anaga cod naga doonaysaan ? Naga helimaysaan” todoba sanadood ka dib musharax Sacad Muuse ah iyo Musharax Habar Yoonis ahi markay wax u soo wada doonteen oo midba sidii uu reerkiisu ka yeelay ay ka yeeleen ma jeegaan baa shirtay.? Ta kale bal iska dhaaf cid kale eh hadii Jeegaantu ay laba reer tahay Awdalna yaa uga codeeyay Kulmiye? Wadada ay kuwani hayaan iyo naxliga jiifa u malayn maayo xataa Muuse dabadii inay ku talogaleen in la doorto musharax beeshooda ah waayo musharaxa isagu halkaa istaagay ee labadaa reerba ka wada maarmay Ilaahay baan idinku dhaariyaye ma yahay siyaasi han leh oo doonaya inuu madaxwayne noqdo.
Anigu waxan idiin sheegayaa jeegaanta aan wado ee Muuse dabadii aan jecelahay inay nin walba hortiisa timaado. Waa Madaxwayne Dhulbahante ah iyo Madaxwayne ku xigeen Gadabuursi ah. Marka beelaha aan Isaaq ahayn oo dhami meel keliya codkoodu maro Isaaqna sedex uu noqdo Jeegaantaasi bal ka warran inankow anigu ta aan taageersanahay waa taas eh?
Mujaahid Cali Gurey
“Arsenal Waxa Ay U Baahan Tahay Qaliin Weyn, Xitaa Haddii Ay Ka Tagayaan Alexis Sanchez & Mesut Ozil”